Motion-Imaging Technology Industry မှအဖွဲ့ဝင်ရှစ်ယောက်အား SMPTE က 'လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်' အဖြစ်သတ်မှတ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Motion-image နည်းပညာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များရှစ်အဖွဲ့ဝင်များအပေါ် SMPTE ညီလာခံ '' Fellow '' အခြေအနေ
Motion-image နည်းပညာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များရှစ်အဖွဲ့ဝင်များအပေါ် SMPTE ညီလာခံ '' Fellow '' အခြေအနေ
ဖွငျ့ဂုဏျစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များခေါင်းဆောင်များ SMPTE အဆိုပါထုတ်လုပ်မှု, ဖြန့်ဝေခြင်း, အကြောင်းအရာ၏ Display ကိုအပေါ်ကို Global သက်ရောက်မှု Make မှ Continue
White Plains, နယူးယော့ - သြဂုတ်လ 21, 2014 - Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က (R) (SMPTE(R)), ယနေ့ပြုလုပ်ခွင့်ပြုခဲ့သောဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်ကြေငြာခဲ့သည် SMPTE ရှစ်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များမှသူချင်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အခြေအနေ။ ဤသည်ဂုဏ်အသရေ, သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းမှပံ့ပိုးမှုများမှတဆင့်, အ Society ၏အင်္ဂါတို့တွင်တစ်ထူးချွန်ရာထူးမှီကြသူတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်အပ်နှင်းသည်။
နယူး SMPTE အပေါင်းအဘော်တို့ဟာအပေါင်းအဘော်တို့နေ့လယ်စာစားပွဲစဉ်အတွင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအောက်တိုဘာ 22 အပေါ်မဝငျနှင့်ထပ်မံကြာသပတေးနေ့အောက်တိုဘာ 23 အပေါ်အသိအမှတ်ပြုခြင်း, မှာပါလိမ့်မည် SMPTE ဂုဏ်ထူးနှင့်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား။ နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ရပ်များအတွက်နှင့် တွဲဖက်. ကျင်းပလိမ့်မည် SMPTE 2014 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ပြပွဲ (SMPTE အဆိုပါ Loews မှာ 2014) ဟောလိဝုဒ် အတွက်ဟိုတယ် Los Angeles မြို့။ အဆိုပါ Fellows နေ့လယ်စာစားပွဲကပြောရမှာမည်ဖြစ်သည် SMPTE Vubiquity မှာအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သူကိုသူချင်း Darcy Antonellis ။
2014 SMPTE အပေါင်းအဘော်တို့
Hanno Bass, 20th Century Fox ရုပ်ရှင်ကော်ပိုရေးရှင်းမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နည်းပညာအရာရှိချုပ် (CTO), အိမ်တွင်းဖျော်ဖြေရေးဇာတ်နာအောင်ပြောခြင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း, postproduction အပါအဝင်နည်းပညာကိုမဟာဗျူဟာနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, ကြီးကြပ်။ သူကအစောပိုင်းကနောက်ဆုံးတွင်အကြီးဆုံးများ၏ 14 ပစ်လွှတ်အပါအဝင်အောင်မြင်မှုများနှင့်အတူထုတ်လွှင့်စနစ်များအင်ဂျင်နီယာအကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်, DirecTV မှာ 2005 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုမိုသုံးစွဲ HD ရုပ်သံလိုင်းရက်စွဲနှင့် DirecTV ၏ဗီဒီယို-On-demand အခြေခံအဆောက်အဦများ 2009 အကောင်အထည်ဖော်မှုမှပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်းအဖြစ်က၎င်း၏၏ DirecTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးမှသိသိသာသာပံ့ပိုးမှုများကို Los Angeles မြို့ ထုတ်လွှင့်ရေးစင်တာ။ ဘေ့စမြူးနစ်, ဂျာမနီအတွက် Institut သားမွေး Rundfunktechnik GmbH (IRT) မှာသိပ္ပံပညာရှင်-အင်ဂျင်နီယာအဖြစ် 1991 ၌သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ခဲ့ပြီးနှင့် ProSiebenSat.1 မီဒီယာ AG ကမှာစနစ်များအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူ 18 မူပိုင်ခွင့်ချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သောမတ်စ် G. အ Edwards က, Fox ကကွန်ရက်အင်ဂျင်နီယာ & Operations မှာအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, ထိုကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်မြင်သံကြား, 3D နှင့်, Fox ကကွန်ယက်ကိုအဖြစ်အဆင့်မြင့်နည်းပညာစီမံကိန်းများအပေါ်အလုပ်လုပ်တယ် ဂြိုဟ်တု ဖြန့်ဖြူးသည့်စနစ်။ Fox ကဝင်ရောက်မီကသူ PBS Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Interconnection စနစ်၏အင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်ရှိရာ PBS မှာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအင်ဂျင်နီယာ၏အကြီးတန်းမန်နေဂျာဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူသည်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေး DIGEX နှင့် IP ကို-ကြီးများမှာမီဒီယာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဝေ streaming တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်ဂြိုဟ်တု ကုမ္ပဏီ Cidera ။ Edwards က၏အစီရင်ခံစာမှလှူဒါန်းခဲ့ထားပါတယ် SMPTE မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကွန်ယက်ဗိသုကာပညာ, အများ၏အစီရင်ခံစာအပေါ်လေ့လာမှု Group မှ SMPTE ပြည်ထဲရေးမှ 3D အပေါ် Task Force နှင့်လူငယ်ကဏ္ဍအင်ဂျင်နီယာလက်စွဲစာအုပ်အမျိုးသားအစည်းအရုံး။ ဖြည့်စွက်ကာ SMPTEသူကလျှပ်စစ်၏ Institute နှငျ့အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာများ (ကို IEEE) ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ယောသပ်သည်ဂျေကိန်းဂျူနီယာ 1982 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဂျိုးကိန်း Productions, အီလက်ထရောနစ်ပုံရိပ်နှင့်သူ၏ကုမ္ပဏီ၏အာရုံများမှာနှစ်ဦးစလုံး၏ display ကိုကိရိယာများပေါ်တွင်ဗီဒီယိုကအချက်ပြမှုများ၏တိကျမှုမျိုးပွါးများ၏သိပ္ပံအတွက်အထူးပြုသည်။ ကိန်းအီလက်ထရောနစ်အနုပညာနေသူများကဖန်တီးပေးသောအပေါ်ပတ္တူ၏စံချိန်စံညွှန်းအတွက်ပါဝင်ကဖြစ်နိုင်သောကြောင့်မြင်စေရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပရိသတ်ကိုကြောင့်အနုပညာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်ရန်အဘို့အအောင်၏ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိပါတယ်။ သူသည်လက်ရှိတွင် Higher-ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပုံစံများနှင့်လက်ရှိနှင့်အနာဂတ် display ကိုနည်းပညာများကို၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးဗီဒီယိုသစ်တစ်ခုစနစ်၏အယူအဆနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ကိန်းကိုလည်း၏မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ် SMPTE ဟောလိဝုဒ် အပိုင်း။
ယောဟနျသ McCoskey အဆိုပါဖြစ်ပါသည် SMPTE အရှေ့ပိုင်းဒေသအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်သူ MPAA ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာဗျူဟာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သေဒဏ်စီရင်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်အဘယ်မှာရှိအမေရိကန်၏ Motion Picture အသင်း (MPAA) မှာအမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် CTO ။ ယခင်က McCoskey သူအားလုံးနည်းပညာမဟာဗျူဟာ, ဖွံ့ဖြိုးရေး, စစ်ဆင်ရေး, နှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ 350 Full-ပါဝါအများပြည်သူရုပ်မြင်သံကြားဘူတာထက်ပိုပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်တာဝန်ရှိသည်ရှိရာ PBS မှာပထမဦးဆုံး CTO အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူကအစောပိုင်းက Comcast မှာကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရှိ၏ အကျဉ်းချုပ်မူရင်းထုတ်လွှင့်မှာ CTO ဖြစ်သူနှင့်တွဲဖက်တည်ထောင်သူ; နှင့်နည်းပညာနှင့် Discovery ဆက်သွယ်ရေးမှာ CTO ၏အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ။ McCoskey 40 ထုတ်ပေးသို့မဟုတ်နည်းပညာနှင့်သတင်းမီဒီယာနှင့်ပတ်သက်သောအမေရိကန် utility ကိုမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်းငံ့ထက်ပိုမိုနှင့်အတူတစ်ဦးတီထွင်သူဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဒရူး Quest 1978 အတွက်ထရိန်နင်အင်ဂျင်နီယာအဖြစ်ဘီဘီစီဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနှငျ့ "Appearances Up ကို Keeping" အစီအစဉ်အားလုံးဖြစ်စဉ်များအပါအဝင်ဘီဘီစီရဲ့ output ကိုဖြတ်ပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့ဗွီဒီယိုအယ်ဒီတာ, ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တစ်ဦးက BBC အယ်ဒီတာအဖြစ်သူ၏သက်တမ်းတွင်, Quest nonlinear တည်းဖြတ်ရေးအဖြစ်စတီရီယိုနှင့်မြင်ကွင်းကျယ်ဖန်သားပြင်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဆက်; အဆုံးမှအဆုံးသို့ tapeless ထုတ်လုပ်မှု၏နိဒါန်းကြီးကြပ်; ဘီဘီစီ၏ပထမဆုံးရက်တွင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခဲအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် HD ရုပ်သံလိုင်း; နှင့်ဦးဆောင် HD ထိုကဲ့သို့သောစီးရီးများအတွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာကြီးကြပ်အဖြစ်ရှေ့ပြေးစီမံကိန်း "Planet ကိုကမ္ဘာမြေ။ " Quest လက်ရှိဥရောပအသံလွှင့်ယူနီယံ (EBU) အတွက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးအပေါ်မဟာဗျူဟာအစီအစဉ် (QC) ဥက္ကဋ္ဌအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလဲလှယ်မှုအတွက်စာရေးဆရာများဘီဘီစီနည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ, နှင့်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် မှာ AS-11 ပီပီလေးစားလိုက်နာခြင်းနှင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအစီအစဉ်အတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်သောဗြိတိန်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက် (ပီပီ) ။ Quest 3D များအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးသမဂ္ဂ (ITU) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ, image ကို dynamic range ကို, IP ကိုအလှူငွေများနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ၏မန်နေဂျာအဖြစ် SMPTE ဗြိတိန်ပုဒ်မသူအသစ်ကဘွဲ့ရခြင်းနှင့်ဗြိတိန်ရဲ့အသစ်အလုပ်သင်အစီအစဉ်များ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပညာရေးအပေါ်အလေးထားပါသည်။
Vince Roberts သည် ဒစ္စနေး / Credit: ABC ရုပ်မြင်သံကြား Group မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးနှင့် CTO ၏အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါသည်။ သူ 1983 အတွက်ဒစ္စနေး Channel ကိုတစ်ဦးတည်ထောင်သူဝန်ထမ်းကြီးနှင့်နောက်ဆုံးတွင် server-based ထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သူဒစ္စနေးရဲ့ပထမဦးဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထုတ်လွှင့်စစ်ဆင်ရေးဝေါ့ဒစ္စနေးရုပ်သံစင်္ကာပူထူထောင်နှင့် 90 ဖျော်ဖြေရေးလိုင်းများထက်ပိုမို၏ပစ်လွှတ်ကြီးကြပ်နှင့် / သို့မဟုတ်ချန်နယ်ထက်ပို 160 နိုင်ငံများနှင့် 30 ဘာသာစကားများ feeds ။ ဒစ္စနေး, ရောဘတ်ပူးပေါင်းမတိုင်မီကတစ်အထူးပြုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုစက်ပစ္စည်းအတွက်မူပိုင်ခွင့်ဝင်ငွေ, MCA နှင့် JVC / EMI / GE နှင့်အတူ videodisc သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှု၏အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အရောင်စနစ်များနည်းပညာ Inc ကိုမှာမိမိနှစ်နှစ်ကာလအတွင်းကုမ္ပဏီဗီဒီယိုအရောင်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုတစ်ခုသူဟာ Emmy (R) ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ရောဘတ် Co-သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ဖက်ဒရယ်ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်ရဲ့ Video Programming သည် Accessibility အကြံပေးကော်မတီအင်တာနက်ပေါ်ရှိ စာတန်းထိုး လက်ရှိတွင်များအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့နှစ်ဦးစလုံး၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ (ယခင် Harris ကထုတ်လွှင့်) နှင့်တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Entertainment ကနည်းပညာရေးစင်တာများ၏အလုပ်အမှုဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့။ သူ 2014 အသံလွှင့်ခြင်းနှင့် Cable ကိုနည်းပညာခေါင်းဆောင်မှုဆုကိုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်လက်ရှိဆိုင်းငံ့လေးမူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ခဲ့သည်။ ဖြည့်စွက်ကာ SMPTEသူ Cable ကိုဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာများ၏ကို IEEE, လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး, ရုပ်မြင်သံကြားဝိဇ္ဇာ & သိပ္ပံအကယ်ဒမီများနှင့်မြောက်အမေရိကလူငယ်ကဏ္ဍအစည်းအရုံးနှင့်မင်းသမီး Emma အယ်လ် Bowen တို့ဖောင်ဒေးရှင်းမှများအတွက်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ဂျင်မ် Starzynski မှာဒါရိုက်တာနှင့်ကျောင်းအုပ်ကြီးအသံအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါသည် NBCUniversal သူအပေါင်းတို့အဘို့အသံနည်းပညာများနှင့်အလေ့အကျင့်ကိုကြီးကြပ်ဘယ်မှာအဆင့်မြင့်အင်ဂျင်နီယာ, NBCUniversal ကုမ္ပဏီ၏နှစ်ခုထုတ်လွှင့်ကွန်ရက်များအပါအဝင်ရုပ်မြင်သံကြားဂုဏ်သတ္တိများ, 26 ဘူတာနှင့် 18 cable ကို channel များကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ Starzynski ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်မြင်သံကြားအသံကျယ်အပေါ်နောက်မျိုးဆက်အသံစနစ်များပေါ်တွင်အဆင့်မြင့်ရုပ်မြင်သံကြားစနစ်များကော်မတီ (ATSC) နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့ခွဲ S34-2 ဥက္ကဋ္ဌနှင့် S6-3 ။ သူလည်းအားကစားဗီဒီယို Group မှ DTV ပေး Audio Group မှများအတွက်ကုလားထိုင်နှင့်စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်အစည်းအရုံးရဲ့အိမ်မှာအသံကွဲပြားခြင်းများအတွက်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Starzynski အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲများစွာထုတ်လွှင့်မှုအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုအဘို့အလေးသူဟာ Emmy Awards ဆုပေးပွဲလက်ခံရရှိခဲ့သည်, သူ ATSC ရဲ့အမြင့်ဆုံးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်အသရေ, အဘားဂျေ Lechner ထူးချွန် Contributor ဆုကို၏ 2011 လက်ခံရရှိသူဖြစ်ခဲ့သည်။
Colin R. Wright သူကအရောင်နဲ့စတီရီယိုအသံနိဒါန်းအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်နောက်ဆုံးတွင်သြစတြေးလျရဲ့ခုနစ်ကွန်ယက်နှင့်အတူ key ကိုအင်ဂျင်နီယာအခန်းကဏ္ဍအတွက် 35 နှစ်ကြာရှိရာသြစတြေးလျအသံလွှင့်ထိန်းချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှာမိမိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း, စတင်ခဲ့သည်။ ထိုကာလအတောအတွင်းသူသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ HDTV စံ၏ဖန်တီးမှုမှလှူဒါန်းခဲ့သည်ခုနစ်၏ဆောက်လုပ်ရေးဦးဆောင် Los Angeles မြို့ သတင်းစတူဒီယိုနှင့်တစ်ခုတည်းအနိမ့်-powered အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအပေါ်နှစ်ခုရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များ, ဒေတာနှင့်မျိုးစုံအသံက channel များကိုတင်ဆောင်လာသောများအတွက်ဆန်းသစ်တဲ့နည်းပညာတွေမိတ်ဆက် ဂြိုဟ်တု link ကို။ Wright Charged-coupled device ကင်မရာများနှင့်အားကစားနှင့်စတူဒီယိုအလုပ်အတွက်တိုးမြှင့်ကင်မရာလင့်များမိတ်ဆက် Hitachi နှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့; နှင့်အတူ Sony က နှင့် EVS disk ကိုစံချိန်တင် / ပြန်ကန်စနစ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်အ 1992 ဘာစီလိုနာနွေရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲမတိုင်မီ။ ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုအသံလွှင့်မွေးစားအဘို့သြစတြေးလျလိုအပ်ချက်များကိုအားမိမိပံ့ပိုးမှုများအတွက် 2000 ဆစ်ဒနီနွေရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းခုနစ်၏မိုဘိုင်းအသံလွှင့်စွမ်းရည်၏စမ်းသပ်ဖွင့်ဖို့ကူညီပေးခဲ့သည်။ Wright ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဧည့်ခံ addressing အမျိုးမျိုးသောသြစတြေးလျကော်မတီများအပေါ်တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ဥက္ကဋ္ဌအခန်းကဏ္ဍရရှိထားသူ; အရည်အသွေးအစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု, ဟိုက်ဘရစ်ထုတ်လွှင့်ဘရော့ဘန်းရုပ်မြင်သံကြား, IPTV, အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်, spectrum ကိုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, Analog စပိတ် / ရုပ်သံလိုင်း restack, နှင့်အသံကျယ်လောင်ထိန်းချုပ်မှု; နှင့် 3D နှင့် UHDTV ။
အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ SMPTE 2014 မှာရရှိနိုင် www.smpte2014.org.
ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်အမှုဆောင်အရာရှိ, အင်ဂျင်နီယာများ, ဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, သုတေသီများ, သိပ္ပံပညာရှင်များ, ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ - - ကမ္ဘာအနှံ့ကဏ္ဍများအတွက်ဖြည့်ဆည်းသူ Society ကထက်ပိုမို 6,000 အဖွဲ့ဝင်များကထောကျနေသည်။ ယင်းနှင့်အတူလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မိတ်ဖက်မှတဆင့် ဟောလိဝုဒ် Post ကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ (R) (HPA (R)), ဒီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကျွမ်းကျင်မှု, ထောက်ခံမှု, tools များနှင့်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများ, ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပြီးများအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦများကိုအဘယ်သူသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိုင်းအဝိုင်းကပြည့်စုံသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ နှင့်အခြားပြောင်းလဲနေသောမီဒီယာအကြောင်းအရာ။ ပူးပေါင်းအပေါ်ပြန်ကြားရေး SMPTE www မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။smpte.org / join ။
အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ SMPTE SMPTE 2014 Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က 2014-08-27
ယခင်: Sonnet ရဲ့: Echo Express ကို III ကို-R နှင့် xMac mini ကိုဆာဗာနှင့်အတူတွင်-တည်နေရာအသံမှတ်တမ်းတင် Workflows Music ကိုရောသမမိုဘိုင်း်
နောက်တစ်ခု: One-Stop Multichannel ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်ပြသရန် IBC မှာ RRsat နှင့်အတူ Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များမိတ်ဖက်